ပန်ဒိုရာ: မုန်တိုင်းကြားက ဘ၀များ နဲ့ အလှတရား အတွက်
Posted by pandora at 12:01 AM
Humanitarian Help for Myanmar said...
နာဂစ်ကို ပြန်သတိပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နိုင်သလောက် ကူမယ်လို့ မှန်းထားတယ်။
အဲဒီကလေးလေးကို သနားလိုက်တာ။ သူလေး
အပါအ၀င် နာဂစ်ဒဏ်ကို ရက်စက်စွာခံခဲ့ကြရသူများ နောက်နောင်ဘ၀များမှာ ဒီဝဋ်ကြွေးဆိုးကြီးတွေကနေ လွတ်ပါစေ..။
အဆင်ပြေရင်တတ်နိုင်သလောက်လေးဖြစ်ဖြစ် ကူညီချင်ပါသေးတယ်။ ကျေးဇူးပါအန်တီပန်။
တဆစ်ဆစ် နာကျင်ဆဲပါ . . .
could u pls. tell me how to donate by cash?is there any volunteer here in singapore??
မှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးပါ.။ မအိန္ဒြာရဲ့ ကဗျာလေးကိုလည်း ပို့စ်မှာ ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။
စင်္ကာပူမှာ cash နဲ့ MBEAN ကိုလှူဒါန်းချင်ရင် pandorao@gmail.com ကို အီးမေးလ် အရင်ပို့လိုက်ပါ။ ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်.။
မမေ့မလျော့ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က ကူညီဖေးမ နေဆဲ ပန်ပန်တို့ကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။